बैतडीका ‘लेन्थवर्कर’हरु को रिले अनशनका १३ दिन व्यर्थ, भएन कुनै सुनवाइ ! – Sodhpatra
आफ्नो परिश्रमको मूल्य रिले अनसन बसेर चुकाउनु पर्ने बाध्यता !
प्रकाशित : ३० असार २०७८, बुधबार २२:३३ July 14, 2021
बैतडीः बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा करिब दुई वर्ष अघिदेखि काम गर्दै आएका लेन्थवर्कहरु रिले अनशन बसेको १३ दिन व्यर्थै बितेका छन् । आफूले २ वर्ष देखी काम गरेको पारिश्रमिक नपाएकोले बाध्य भएर रिले अनसन बस्न परेको लेन्थवर्कर उमेश अवस्थीले बताए ।
यता बैतडीबाट निर्वाचित सांसदहरूले पनि लेन्थवर्करहरुले पारिसर्मिक पाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बैतडीबाट निर्वाचित संविधान सभा सदस्य सङ्घीय सांसद दामोदर भण्डारीले पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्ड प्रदेश मातहत गएको सडक भएकाले प्रदेश सरकारले नै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्ट (आदित्य)ले पनि प्रदेश सभामा उनीहरूको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने भन्दै लेन्थवर्कर हरूको विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
यद्धपी खै किन हो कुन्नि भोक प्यास, दिन/रात, हिउँद/बर्खा नभनी काम गरेका निर्दोष मजदुरहरूले उही भोको पेटमा रिले अनसन बस्न परेको छ । लेन्थवर्करहरुले आफ्नो मेहनत र पसिनाको फल कहिले पाउने ?